Gbasara Anyị | Hebei Ximai Machinery Equipment Sales Co., Ltd.
N'ihi na ihe karịrị afọ 20 mmepe, Hebei Ximai Machinery toro ka a saa mbara ihe mgbapụta ngwa emeputa. Ngwaahịa anyị na-ekpuchi edemede 4, ihe karịrị ngalaba 30 na ọtụtụ puku otu ihe. Isi obodo Ximai e debara aha ya bụ yuan nde 75, na-ekpuchi mpaghara nke 94, 600 mita anọ, ma ugbu a karịa 350 na-arụ ọrụ, gụnyere ndị injinia 13, 27 R & D / mmesi obi ike / ndị ọrụ teknụzụ, karịa ndị ọrụ nrụpụta 240, yana karịa Ndị ọrụ ọrụ 60
Ximai nwere ngụkọta mmepụta 13, gụnyere workshopcha omumuihe, CNC machining ogbako, Derusting ogbako, ịgbado ọkụ ogbako, sere sere. Anyị factory nwere ọtụtụ nnukwu-ọnụ ọgụgụ ọkachamara ngwá, dị ka, àjà ihe ọ ultraụ -ụ-elu ugboro okpomọkụ ọgwụgwọ akụrụngwa, akpaka ala okpomọkụ ịgbado ọkụ na ngwá, haịdrọlik pịa, nnukwu CNC igwe na na. Anyị nwere ike ịmepụta ọkpọkọ mgbapụta, akwa akwa na ngwa enyemaka maka PM, SCHWING, CIFA, JUNJIN, SANY, Zoomlion, Foton na ndị ọzọ
Kemgbe 1995, erere ngwaahịa Hebei Ximai′s karịa mba 80 na mpaghara ụwa. Na-agbaso ụkpụrụ nke "ndị ahịa mbụ" na "akara mbụ", Hebei Ximai guzobere usoro ọrụ ndị ahịa zuru ezu. Na ezi mma, ezi uche price, mgbanwe ugwo usoro, na-oge nnyefe na zuru okè ahịa ọrụ, Hebei Ximai nweta aha ọma n'etiti ndị ahịa.
Ọ bụrụ na ị ...
1. Na-achọ ndị na-emepụta OEM / ODM na ụlọ ọrụ a.
2. chọrọ onye nwere ike imepụta ihe ịchọrọ ma nwee nhazi omenala edepụtara na nkọwapụta gị.
Mgbe ahụ ọrụ OEM / ODM anyị bụ maka gị!
Ọ bụrụ na ị…
1. Chọrọ ịzụta a sample iji mbụ.
2. zụta ihe zuru ezu mgbe nkwado ngwaahịa ngwaahịa.
Mgbe ahụ, Ọrụ Nlereanya anyị bụ maka gị!
1. Chọrọ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ anyị.
2. Ọ ga-amasị m ịga leta China ma nwee mmasị isoro anyị rụọ ọrụ.
Mgbe ahụ anyị ọrụ nlegharị anya ọrụ anyị bụ maka gị!